Iinqwelomoya eziMangalisayo zeF-117 Nighthawk Stealth Fighter
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Iinqwelomoya eziMangalisayo zeF-117 Nighthawk Stealth Fighter
uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Tourism • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Nangona i-F-117 Nighthawk Stealth Fighter jet ithathe indawo ngokusesikweni yi-F-22 Raptor jet, kubonakala ngathi isasebenza, ifihliwe njengemijukujelwa yokuhamba ngenqanawa. Ngapha koko, imbali ye-Nighthawk ayikho ngaphandle kwemfihlakalo.
Ukudalwa kweNighthawk kwenziwa emfihlakalweni ukuqala ngo-1975.
Yayiqala ukubhabha ngo-1981, kodwa yayigqutyuthelwe ngokufihlakeleyo, kwaye uluntu lwalungazi malunga nenqwelomoya kude kube yiminyaka esi-7 kamva.
Emva kokubhengezwa kokuthatha umhlala-phantsi okoko kwathathelwa indawo nguRaptor, kubonakala ngathi inqwelomoya ibigcinwe ngelixa kwangaxeshanye ingasebenzi kwaphela.
I-Nighthawk yaqalwa yaphuhliswa njengeenqwelomoya zokuhlaselwa nguLokheed Martin emva komsebenzi kwitekhnoloji yobuchwephesha. Ukudalwa komanduleli wayo, inqwelomoya yovavanyo ebizwa ngokuba yiBlue Blue, yenziwa ngokufihlakeleyo ukusukela ngo-1975.
Ngo-1978, i-F-117A yaya kuphuhliso kwaye yaqala ukubhabha ngonyaka ka-1981.
Phakathi konyaka we-1982 kunye nowe-1988, i-Nighthawk yokuqala yathunyelwa njengenqwelomoya yokuqala yokusebenza ngenqwelomoya e-United States Air Force (i-USAF). Iya kuba yenye yeenqwelomoya ezingama-59 ezifihlakeleyo i-USAF eyayiza kuyifumana ngo-1990, iphawula eyokugqibela ukuhanjiswa.
Umkhosi woMoya wase-United States uthathe indawo ye-F-117 nge Umxhasi we-F-22 Phambi kokuba inkqubo ye-F-22 irhoxiswe ngo-2009. Yathatyathelwa indawo nge-F-35 Joint Strike Fighter engabizi kakhulu. Iinqwelo-moya zokuqala ezilishumi kwezingama-55 zeF-117 ezazisenkonzweni zathatha umhlala-phantsi ngoDisemba ka-2006. Umsitho wokuthatha umhlala-phantsi ngokusesikweni wenzeka eWight-Patterson Air Force Base ngo-Matshi 2008.
Kodwa iiNighthawks azikho. Zigcinwa kwii hangars kwibala leenqwelomoya kuVavanyo lweTonopah eNevada. I-4 Nighthawks yokugqibela yafika kuVavanyo loVavanyo ngo-Epreli 22, 2008. Amaphiko kunye nemisila zisusiwe ukuze zigcinwe, kodwa ezinye iinqwelomoya zinokukhumbula ngokukhawuleza ukuba zibhabha xa kufuneka njalo.
Kutshanje, uMkhosi weSizwe woMoya uqinisekisile ukuba i-F-117 Nighthawks iyasetyenziswa kuqeqesho lokuziqhelanisa, kubandakanya nokusebenza njengabaphembeleli bemijukujelwa engenayo. Ubungqina bubonisa ukuba olu qheliselo loqeqesho belusenzeka kangangexesha elithile ngoku. Ngenxa yokuba inqwelomoya iyakwazi ukulinganisa iintshukumo ezinjengemijukujelwa yokuhamba ngenqanawa, zizinto ezifanelekileyo zokuzikhusela.
I-Nighthawk mhlawumbi ifumene igama layo kuba isetyenziselwa kuphela ixesha lokuya ebusuku. Kwaye ngasese, ngaphandle kwamathandabuzo, inikwe imbali yayo kunye nombala wayo omnyama, isenza ukuba kube lula ukudibanisa esibhakabhakeni sasebusuku. Kodwa ngubani ofuna ukudibanisa xa ungabonakali kwi-radar?
Imiphezulu kunye neeprofayili ezisecaleni zeNighthawk zenzelwe ukuba zibonise i-radar enobutshaba kwiimpawu ezixineneyo zomqadi, zijolise kude kumtshini weradar yotshaba. Zonke iingcango kunye neepaneli zokuvula kwiinqwelomoya ziye zabona amazinyo abheke phambili kunye nasemaphethelweni abonisa i-radar. Umphezulu wangaphandle wenqwelomoya ugutyungelwe zizinto ezifunxa iradar (RAM). Konke oku kwenza ukuba kungabonakali.
Eyaziwa nangokuthi yi-Frisbee kunye ne-Wobblin 'Goblin, i-mission ye-F-117A Nighthawk kukungena kwindawo ezinobungozi kwaye ihlasele iithagethi ezinexabiso eliphezulu ngokuchaneka okuphezulu. I-Nighthawk ibikwinkonzo yokusebenza ePanama, ngexesha leSiphepho seDesert Desert, eKosovo, eAfghanistan, nangexesha lokusebenza kweNkululeko yaseIraq.
Inqwelomoya moya owakhiweyo ubukhulu becala wenziwe ngealuminium ene titanium yemimandla yeenjini kunye neenkqubo zokukhupha.